နန်းဆိုင်နွမ်| November 12, 2012 | Hits:1
| | အိုဘားမားကို ကြိုဆိုသည့် ဂရက်ဖတီကို ဖျက်ဆီးခံရပြီးနောက် မြင်တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
ဈေးချိုတော် ညဈေးတန်းဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်း ရှိ၊ မရှိ သမိုင်း အထောက် အထားများ မတွေ့ဟု ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး ပြောပုစွန် နာနတ်သီး ထမင်းကြော်ကိုင်ဇာ၊ မေဆွိ၊ မေခလာတို့ရဲ့ “သူငယ်ချင်း သုံးယောက်” Live Show ကျင်းပမယ်“ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်” အနုပညာ ပြပွဲ ကျင်းပ
Aussieaussie November 12, 2012 - 5:19 pm when George Bush was in Australia in 2003 – U S president group is about 500 plus. including his own chef.
Reply Aung November 12, 2012 - 11:50 pm That processing is not only George Bush but every Presidents go everywhere with Their own OpSec Group and personals. How can Burma can provide Security with lack of technology, training, and C3..(Command, Control, Communication) even to provide Daw Aung San Suu Kyi ..
Reply tunaung November 12, 2012 - 6:07 pm အခုလိုမျိုးဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့လုပ်ရပ်က၊အဲဒီဖျက်ဆီးတဲ့သူမှာမစ္ဆရိယစိတ်အမြဲဖုံးလွှမ်းနေလို့ဖြစ်ပါ
Reply aryoneoo November 12, 2012 - 7:47 pm I didn’t see any welcome sign in there.Also you have no right to do it.No democracy in public wall.I respect your art.But,try another way to become popular.
Reply moepwint November 12, 2012 - 8:50 pm ဒီလိုကိစ္စမျိုး လုပ်တာ … တော်တော်ကိုဆိုးပါတယ် …
Reply ZAW November 12, 2012 - 10:40 pm BOTH ARE CRAZY, DAMAGE THE CITY.
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 13, 2012 - 3:25 am ကိုအာကာကျော်ရေ စိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့။ ဘာလို့ဆို အိုဘားမား အဲသည် ဟိုတယ်မှာ တည်းတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ စိတ်ချ။ အမေရိကန်တွေက အရွေးခံရလို့ တက်လာတဲ့ သမတကို မဲပေးခဲ့သူရော၊ မဲမပေးခဲ့သူ အများကပါ တိုင်းပြည် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တန်ဘိုးထားတယ်။ မှဲ့တပေါက် မစွန်းမှ ကြိုက်တယ်။ အခု ချက်ထရီယံမှာ တည်းမယ် သတင်းထွက်တယ် ဆိုရင် တည်းတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ နောက်တနေရာ ရှာဆွဲလဲ ဆွဲထားတာ တွေ့ရင် သူတို့ သမတလာမှာ သိနေလို့ လာဆွဲထားတယ် ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ Secret Agents တွေက အဲသည်နေရာ မယူပဲ နေရာ ပြောင်းဦးမှာပဲ။ နောက်ဆုံးမှာ သံအမတ်အိမ် ဖြစ်ဖြစ်၊ အန်တီစု အိမ် အနား မှာ တည်းလိမ့်မယ်။ နောက်တခုက Graffiti ဆိုတာ အစကတည်းက သူများ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ နံရံတွေ၊ အဆောက်အဦးနံရံတွေမှာ ခွင့်မတောင်းပဲ လိုက်ဆွဲထားတာ။ ကိုယ်က အပြစ်ကျူးလွန်ပြီးသား။ အဖျက်ခံရမှာ မဆန်းဘူး။ အမေရိကားမှာတော့ အဲသည် Graffiti တွေကို လူတွေ သိပ် အမြင်မကြည်ဘူး။ နံရံ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ရှင်းရှင်းသန့်သန့် မြင်ချင်တာ သူတို့ဟာတွေ လာ ဆွဲထားတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာတော့ အဟုတ်မှတ်နေကြပေမယ့် တချို့က လှလဲ မလှ၊ အလွန် အကျည်းတန်တယ်။
Reply ungng November 14, 2012 - 12:49 pm မြန်မာတိုင်းရင်းသူတင်ပြတာကိုထောက်ခံပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းလူငယ်တယောက်ပါပဲ ပန်းချီကိုလည်းလေးစားစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ဒါပေမည့်အဲဒီ graffiti ဆိုတာကိုမခံစားနိုင်ဘူး။ အဓိကဆိုလိုချင်တာကတော့စည်းကမ်းမရှိလုပ်ချင်ရာလုပ်နေတဲ့အဖျက်လုပ်ငန်း၊အနုပညာဆို ပြီးအနုပညာကိုနာမည်ဖျက်နေတဲ့အဖျက်လုပ်ရပ်ပဲလို့မြင်တယ်။မကြိုက်ဘူးဗျ။လက်မခံနိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲဒီလုပ်ရပ်ကို rackless-roadside-squiggles တွေလို့ပဲ သဘောထားပါတယ်။
Reply uko November 19, 2012 - 1:49 pm သြော် .. သူ့ပုံ အဖျက်ဆီးခံရလို့ တော့ ခံစားရတယ်ပြောတယ် ။ သူလိုလူတွေ သူများ ဆိုင် တံခါး ၊ ခြံစည်းရိုးတွေမှာ လိုက်ရေးတုန်းက အဲ့ဒီပိုင်ရှင်တွေ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ မတွေးမိဘူးလား ။